2 Layers 2oz PCB 2-layers Standard PCB ENIG 1 တွင်းအတွင်းပိုင်�PCB 2-အလွှာနျ Standard PCB ENIG 2oz အလွှာ်းကောင်း NO X-OUT - တရုတ်နိုင်ငံ2Layers 2oz PCB 2-layers Standard PCB ENIG 1 တွင်းအတွင်းပိုင်းစက်များတွင်လည်းကောင်း NO X-OUT ပေးသွင်း,စက်ရုံ -WMD
နေအိမ် » ထုတ်ကုန်များ » ရိုးရှင်းသော PCB
2 PCB 2-အလွှာနျ Standard PCB ENIG 2oz အလွှာ 1 တွင်းအတွင်းပိုင်းစက်များတွင်လည်းကောင်း NO X-OUT
97*120မီလီမီတာ / 10pcs
2 အလွှာနျ Standard PCB မူလစာမျက်နှာလျှောက်လွှာများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, မျက်နှာပြင်ကုသမှု ENIG ဖြစ်ပါသည် , ကြေးနီ 2oz ဖြစ်ပါတယ်ပြီးဆုံး, အထူ 1.6mm ဖြစ်ပါသည်±10% , ပစ္စည်း FR4 ဖြစ်ပါသည်, Tg135. X-ထွက်ခွင့်မရှိကြ, 25အွမ်ပေါက်ကြေးနီ. အရည်အသွေးအာမခံချက်ကိုအကောင်းဆုံး PCB ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်အဓိကဒြပ်စင်ဖြစ်ပါသည်, အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျဉ်ပြားများအတွက်, ကျနော်တို့ ul လက်မှတ်ရရှိ, ISO ကို 9001, ul နှင့် IPC လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီ, 100% လျှပ်စစ်စမ်းသပ်ခြင်း, 100% Visual စစ်ဆေးရေး (အတိုင်အပါအဝင် & လှည့်ကွက်စစ်ဆေးမှုများ), ရှုထောင်စစ်ဆေးရေး, Microsection, ဂဟေဆက်စမ်းသပ်ခြင်း, နှင့်တောင်းဆိုမှုကိုအပျေါမှာရရှိနိုင်သမျှသောအခြားအ PCB စမ်းသပ်ခြင်း.
2 အလွှာ 1.0MM immersive ရွှေအပြာရောင်ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများအ Led PCB ဘုတ်အဖွဲ့အွန်လိုင်း PCB
SMD ဟာဖယောင်းစက္ကူသတ္တုဟာဖယောင်းစက္ကူ Smt ဟာဖယောင်းစက္ကူလေဆာ mount မျက်နှာပြင်များအတွက်စည်းဝေးပွဲကိုသံမဏိဟာဖယောင်းစက္ကူဖြတ်